Ngaba isebenza njani inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS? | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Tags: I-Global Positioning System IGPS Bantwana beTracker Bukela
IGPS (I-Global Positioning System) Iitreyikhi zezixhobo ze-elektroniki zokuhamba, ukuvumela abazali, abaphathi, kunye nabanini bezithuthi ukuba babeke iliso kwizinto zabo kunye neemoto zabo ngexesha langempela. I-tracker ye-GPS, eyenzelwe ngokukodwa izithuthi inakho ukubonelela ngesantya esichanekileyo kunye nedatha yendawo, ngelixa ukhetho oluncinci olurekhodayo irekhoda olu hlobo lolwazi oluza kusetyenziswa kamva. Ngamafutshane, kukusebenza kwenkqubo yokulandela umkhondo ye-GPS eyazisa ngokusetyenziswa kwe Inethiwekhi yeNkqubo yeHlabathi yeSatellite (GNSS). Eminye imiqondiso ye-microwave ikhutshwe yile nkqubo emva koko ethunyelwa ngokusebenzisa iseti yezixhobo ze-GPS. Uhlobo olunjalo lwezithuthi zinokufunyanwa kwii-smartphones kunye neemoto. Ulwazi lomthombo luqukethe ukusasazwa kwiimoto zizinto ezinje ngesantya seemoto, indawo, isikhombisi, njl.
Malunga nokutsalwa kweGPS yesithuthi okanye itekhnoloji yonxibelelwano lweZithuthi, ukuya kuthi ga kwiintlobo ezine zezinto eziyinxalenye yenethiwekhi eyenza ukuba kunokwenzeka, kubandakanya:
Isixhobo sokulandela umkhondo weGPS
Makhe sivavanye ukuba isebenza njani iNkqubo ye-GPS yokuLanda umkhondo
Unokwazi, INkqubo yokuKhangela ye-GPS isebenzisa inethiwekhi yebhodi leesathelayithi ukumisela indawo eyiyo isixhobo sakho eyilelwe ngokukodwa injongo. Ingcinga esisiseko emva kwe tracker yeGPS isebenzisa indlela, eyaziwa ngokuba yiTrilateration yokuqinisekisa okanye ukufumana indawo ebonakalayo yesixhobo esekwe kumgama wayo ukusuka kwi-GPS Satellite ye-GPS. Itekhnoloji ethe ngqo isetyenziswa zizixhobo zakho eziphathwayo okanye kwinkqubo yokuhamba ngemoto. Kukho kuphela umahluko omncinci phakathi kwesikhangeli se-GPS kunye nenkqubo yokuhamba ngemoto indlela ebonelela ngendawo yakho kunye nezalathiso zokuqhuba, ngelixa i-tracker isasaza iindawo ngela xesha okanye ukugcina irekhodi yeendlela zokuqhuba.
Inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS esetyenziswa kwinqwelo-mafutha iyakwazi ukusasaza indawo, ngokufutshane, isebenzisa itekhnoloji enye eyenziwayo ukunxibelelana nehlabathi nge-Intanethi okanye ukutsala umnxeba ukuhlala unxibelelana nezihlobo, abahlobo , kunye namalungu osapho. Esona sizathu siphambili sokuba abanye abakhweli bemoto yeGPS badinga umrhumo wenyanga wokurhuma.
Ungathenga inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS oyisebenzisayo njengokulandela imoto, ukujonga abasebenzi, kunye nokunye. Zintathu iindidi zeendlela zokulandelela ii-GPS ezikhoyo, nangona uninzi lwe-GPS luxhotywe ngokupheleleyo ziifowuni kwaye lunokusebenza nangayiphi na indlela kuxhomekeka kwizicelo ezifakwe kwifowuni.
Dibanisa umkhondo weGPS
I-Tracker ye-OBD ye-GPS yeZithuthi
Umsebenzi wezixhobo zokulandela umkhondo we-GPS zikwipatheni efanayo, kodwa endaweni yokubonisa ulwazi kuso nasiphi na isixhobo, i-microprocessor ekwisixhobo iya kubala indawo eyiyo kwaye idlulise idatha egqityiweyo kwiseva ephakathi kwi-Intanethi kusetyenziswa iifowuni eziphathwayo. Emva koko, iqonga liphethwe ngumncedisi ukubonisa indawo yangoku kunye neendlela zembali yesixhobo esiya kubasebenzisi, kunye nesantya kunye nezaziso.
Kukho ezinye izibonelelo zenkqubo yokulandela umkhondo ye-GPS abanokuthi abanini bamashishini bayithumele ukulandela umkhondo wenqanawa ejonga indlela abasebenzi abaziphethe ngayo. Abanye abahambi babeke izixhobo zeGPS kwimithwalo ukuyikhusela ekubeni ibiwe okanye ilahleke. Uhlobo olunjalo lwenkqubo lukwabalulekile kwiintsapho. Intsapho inokusebenzisa izixhobo ze-GPS ukugcina iliso kubantwana, abantu abadala, okanye izilwanyana zasekhaya.
Ngaphambi kokukhetha umkhondo we-GPS, kuya kufuneka uye kwisixhobo ukuba ufuna ukwenza nje okanye ixesha lokulandela umkhondo.
Zintoni iiPrayive Passers?
Abasebenzisi abavumelekanga ukulandela yonke into eyenziwayo ngumntu kunye nomntu ngelixa besebenzisa i-Passive Tracker. Okokuqala, ulwazi lufunyenwe kwaye emva koko ukhuphele kwi-PC ukuze ubone. Iindidi zee-trackers zihlala zifikeleleka njengoko zingenamali yokurhuma. Umzekelo, lo kumkani wesixhobo unokuqokelela idatha efana nokuba le ndlela ihambile kwiiyure ze12 ezidlulileyo. Idatha eqokelelweyo igcinwa kule nkqubo yokulandela umkhondo we-GPS kuyo nayiphi na imemori yangaphakathi okanye imemori khadi, ethi kamva ikhutshelwe kwi-PC ukuze ihlaziywe.
Yintoni iiTrackers ezisebenzayo?
Kwelinye icala, inqubo kunye nokuhambisa idatha ngexesha langempela usebenzisa inkonzo yeselula eyaziwa ngokuba yi-Active Tracking. Uya kufumana ulwazi lwexesha lokwenyani ngenethiwekhi yeselula ekuvumela ukuba ujonge iiasethi okanye izinto zexabiso. Kufuneka uhlawule iifizi zenyanga nenyanga zokusetyenziswa kwale nkonzo. Ngenye yeendlela ezilungileyo zokusetyenziswa kwezorhwebo njengokuhamba ngomkhosi weenqanawa, ukubeka iliso ebantwini, kubandakanya abantu abadala okanye abantwana, njengoko ivumela izipho zabo ukuba bazi ukuba ziphi na izithandwa zabo, nokuba zisexesheni okanye kufanele ukuba luhambo.
Inkqubo yokulandela umkhondo wefowuni
Inkqubela phambili kubuchwepheshe bonxibelelwano yenza ukuba kube lula ukulandela umkhondo kwi-mobile. Kule mihla, izixhobo zeselfowuni ziya zisihambela phambili kwaye zikunika amandla okuqhubeka nokuthetha. Inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS yeselfowuni yenye yezo nkqubela phambili. Ngokuqhubekayo, iselfowuni esasaza umqondiso kanomathotholo, nokuba ayisebenzi okanye umnxeba. Zonke iinkampani zeeselfowuni zinokuqikelela indawo yefowuni ngqo yefowuni iminyaka emininzi zisebenzisa ulwazi olunxantathu ukusuka kwinqaba ifowuni ifumana isiginali.
Ngetekhnoloji ye-GPS, indawo yakhe nabani na ophethe isoftware esekwe kwi-GPS inokulandelela ngokulula nangaliphi na ixesha. Inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS yefowuni, ke, inokuba luncedo kakhulu kwindawo yokujonga umbono weshishini, ngakumbi kubanini, kubahlobo, kubazali, nakwabasebenza nabo.
Ukuba ujonga inkqubo yokulandela umkhondo ye-GPS, ke unokufumana izandla zakho ngeemveliso ezilungileyo ezizodwa ezenzelwe iinjongo zokulandela umkhondo we-GPS. Njengoko uyazi, itekhnoloji yale mihla yenze ukuba ubomi bethu bube ngcono ngakumbi kwaye bafumane iindlela ezintsha mihla le ukuze benziwe bakhululeke. Nokuba ufuna ukugcina iliso kwizithuthi, abantwana, abantu abadala, okanye izilwanyana zasekhaya ngasinye kunye nayo yonke into ilele. Kule mihla, intengiso igcwele iimveliso ezibonelela ngenkonzo yokulandela umkhondo we-GPS kwaye uqhubana kakuhle nayo. Ezinye zazo zezi zilandelayo:
Bantwana beTracker Bukela
Ukujonga umkhondo we-GPS yabantwana naBadala
Isikhombisi se-Ankle ye-GPS
Ukujonga amanzi kwi-GPS engamanzi
6749 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-10 Namhlanje
Indlela yokufumana umkhondo we-GPS okanye isixhobo sokumamela kwiimoto